US oo ciidankeeda ka saaraysa Galbeedka Afrika - BBC Somali
US oo ciidankeeda ka saaraysa Galbeedka Afrika
Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa sheegay in 100 askeri oo maraykan ah keliya lagu reebi doono galbeedka Afrika meesha lagu gaaro dhamaadka bisha April.
2,800 oo Ciidamadan oo Maraykankan ah ayaa loo geeyey galbeedka Afrika si ay gacan uga geystaan xakameynta cudurka Ebola.
Talaabadan ayaa waxa ay daba socotaa warka ku saabsan in ay sara u kacday tirada cusub ee dadka uu ku dhacay cudurka Ebola labadii todobaad ee la soo dhaafay taasi oo soo afjartay warkii wanaagsanaa ee dhiirigelinta lahaa ee ahaa in ay hoos u dhacayso tirada dadka uu ku dhacayey cudurka.
Hay’adda caafimaadka aduunka ee WHO ayaa waxa ay sheegtay in dalka Sierra Leone laga helay 76 kiis oo cusub halka Guinea laga helay 144, Liberia laga diiwaan geliyey 3 qof.
Ku dhowaad 1,500 oo askeri oo marakan ah ayaa hore uga laabtay galbeedka afrika. Dhamaan ciidamada maraykanka ee ka laabanaya Galbeedka afrika lagu qasbayo in ay in ay galaan 21 maalmood oo karantiil ah.
Ku dhowaad 23 kun oo qof ayuu ku dhacay cudurka galbeedka Afrika tan iyo markii uu cudurka ka dilaacay dalka Guinea dhamaadkii 20013-dii. 9 kun oo qof ayaa u dhintay cudurka.